Kulokhu ububha nendlala kabazi bala nazwe – Bayede News
Kulokhu ububha nendlala kabazi bala nazwe
Abantu abayizigidi ezine e-United Kingdom
ISITHOMBE ESEHLUKILE: Indlala nobubha buyayikaka i-United Kingdom
Abantu abayizigidi ezine e-United Kingdom bakakwe wububha obumangalisayo uMfo
UMa uhamba ezitaladini zedolobha iLondon e-United Kingdom uhehwa wubuhle bezakhiwo ezikhona kusuka emahhovisi kuya kulezo esezaphenduka ifagugu ngenxa yomlando wazo.Lapha kungabalwa, izakhiwo zePhalamende, izigodlo zoBukhosi bamaNgisi kanye nezindawo zokukhonzela. Zonke lezi zakhiwo zilethela leli dolobha imali enjengemali njengengxenye yezokuvakasha. Njengoba ngalesi sikhathi kuyisikhathi samaholide izinkulungwane zemindeni zihambela izindawo ezahlueke nalapha zichithe imali.
Amahhotela ehlukene, ngokwezigaba zawo kusuka kulawo amancane kuya ezikhondlakhondleni, asuke ephithizela ngabantu bakuleliya lizwe kanye nezivakashi. Lesi sithombe siveza izwe lapho wonke umuntu esesinweni esingcono sempilo nomnotho. Iqiniso lithi akunjalo, i-United Kingdom njengamanye amazwe nayo ibhekene nenkinga.Lokhu kufakazelwe wumbiko okhishwe yiThe Social Metrics Commission nenxuse ukuba uNdunakulu omusha uMnu uBoris Johnson angenelele ukuze isimo lesi singabi yinhlekelele.
Embikweni wayo iKhomishini eholwa nguNks uPhilippa Stroud iveze ukuthi kubantu abayizigidi eziyisikhombisa, okubalwa nezingane eziyizigidi ezi-2,3 yilokho abakubiza ngobubha obuqhubekayo, nabakuchaze ngokuthi yisimo lapho bebhekene nobubha nobuphofu iminyaka emithathu ilandelana. Kulokhu kwezingane uNks uStroud ugcizelele ukuthi kumqoka ukuba lolu daba lubukwe ngelibanzi. “Lesi yisikhathi sokuba sibuyekeze izinhlelo zethu eziqondene nezingane ukuze sikwazi ukutshala okuyikho kwazise izingane lezi ziyikusasa lesi sizwe sethu”, ubeke kanje:
“Okutholwe wucwaningo kuveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqubuka kabusha kobubha obukhulu, okwaziwa ngokuthi ukuntula, ngakolunye uhlangothi olunye ucwaningo lukhombise ukuthi babalelwa ezigidini ezi-1.5 njengoba kuncishiswe izibonelelo kwenyuka nemali yokuqhasha. Izinga lobubha liyimali eli-£140 ngesonto kubazali abanezingane ezimbili.Umbiko uveze ukuthi yize izibalo zingehlukile kangako kunalezo ezedlule kepha okugqamayo yikuthi abantu abayizigidi ezili-14,3 baphila esimweni sobubha, kuthi abayizigidi ezi-4,5 bakhungethwe ububha obuxakile.
Lokhu kusho ukuthi abazali abanezingane ezimbili bathola ama-£221 ngesonto sekukhishwe izindleko zendlu, umzali ongayedwana onengane eyodwa abenemali engaphansi kwe-£101.50.Okunye okuvelile wukuthi liyanda izinga lobubha kulabo abenezingane ezintathu kuya phezulu. Ngesikhathi leli phephandaba lihamba ezitaladini zaseLondon libonile izindawo lapho abathile bemi khona ngenhloso yokucela usizo kwabadlulayo nokuyisimo esejwayelekile emazweni afana neNingizimu Afrika lapho amazinga endlala nobubha ephezulu.
ENingizimu Afrika kwejwayelekile ukuthi kube khona umuntu noma izizukulwane ezizalwa ziphinde zifele endlaleni nasebubheni. Iningi lamaNgisi alikwejwayele lokhu kepha ukuguquguquka kwesimo sezwe, somnhlaba kanye nomnotho kwenza lingabi bikho izwe elingafunga ukuthi lona ngeke lizithole kulesi simo.Lena ngeminye yemibuzo engaphenduleki kulabo abakhuluma ngokuthi i-United Kingdom iphume yini ngaphansi kwe-European Union (EU).Iningi lesabela ukuthi ukuphuma kuze nobubha nokho abanye bathi akunjalo.
Posted in Ububha Nendlala